News – MYANMAR MEDIA ZONE
မုံရွာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မှာ ဆေးရုံတက်ရင်း ဆေးဖိုးအတွက် ငွေကြေးအခက်ခဲဖြစ်နေလားကျွန်တော့်ဆီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။စီစစ်ပြီး တကယ် နွမ်းပါးလူနာဖြစ်ပါက ရေချမ်း ဆေးဆိုင်မှာ ဘေ ဖွင့်ပေးပြီး လူနာရေးရုံဆင်းသည်အထိတာဝန်ယူပေးပါမယ်ခဗျာလက်ရှိ ကူညီပေးနေတဲ့လူနာနှစ်ယောက်ကတော့ဆေးရုံဆင်းသွားကြပါပြီ။ လူနာနှစိဦးအတွက် စုစုပေါင်းဆေးဖိုး ၁၄၂၆၀၀ ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီခဗျ။တကယ်ကို နွမ်းပါးပါက တကယ်ကူညီပေးပါမယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေအသိမိတ်ဆွေဖြစ်စေ မိတ်ဆွေပတ်ဝန်းကျင်မှာ နွမ်းပါးလူ တွေ့သည်ဖြစ်စေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခဗျာ။ အကူညီလို လို့ခေါ်ရင် ပထမဦးစွာ
ဦးဖိုးဖြူက ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ အကြောင်းကို ခုလို ပြောပြပါတယ် ဦးဖိုးဖြူ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ ဘီပိုး စီပိုး အခမဲ့ ကုသနိုင်ပါပြီ ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ဦးဖိုးဖြူ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခ ပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ အသည်းယောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကို အဓိကထားကုသပေးလျက်ရှိပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅
၁၂ ပေထိ လှိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေ ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းအရေးကြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဖတ်မိမှာပါ… ယခု မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်မှာတော့ မုန်တိုင်းသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်…. နောက်ထပ် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်းအရ ယနေ့ကစလို့ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ (၈)ပေကနေ (၁၂)ပေခန့်
မူးယစ်ဆေးတွေဖမ်း လာဘ်မစားတဲ့ စခန်းမှူးကို ရခိုင်ပို့တော့ သက်ပျောက်တရားနာရပြီ
မူးယစ်ဆေးတွေဖမ်း လာဘ်မစားတဲ့ စခန်းမှူးကို ရခိုင်ပို့တော့ သက်ပျောက်တရားနာရပြီ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဖမ်း လာဘ်မစား လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့အုပ်ချုပ် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်လို့ ရခိုင်အပို့ခံရတဲ့ ဟုမ္မလင်းစခန်းမှူး ဦးကြည်စိုးကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှာ သက်ပျောက်တရားနာရပြီလေ… ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ… နောက်ဘဝ လူဖြစ်ခဲ့ရင်လဲခုလိုလူယုတ်မာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဋ္ဌာနမှာဝန်ထမ်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဦးကြည်စိုးရေ…. မူးယဈဆေးတှဖေမျး လာဘျမစားတဲ့ စခနျးမှူးကို ရခိုငျပို့တော့ သကျပြောကျတရားနာရပွီ မူးယဈဆေးဝါးတှဖေမျး လာဘျမစား